အချစ်တဲ့ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on September 22, 2011 at 14:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြတဲ့အခါ ကလေးဘ၀အချိန်ကတည်းက အချစ် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မကြာခဏကြားနေရတာပေါ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပွင့်အန်လာတတ်တာ ဓမ္မတာပါ။ we are biologically programmed to be attracted to opposite sex.ပေါ့။ အချစ်ဘယ်ကစသလဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မြင်ဖူးတွေ့ဖူးခြင်းမရှိပါပဲ အောင်သွယ်တော်ကောင်းမှုနဲ့ တွေ့ကြတဲ့ blind date မျိုးလည်းရှိတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားကြတယ်တဲ့။ love at first sight. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှ beauty ၊ ညှို့ဓါတ်(သို့) ကျက်သရေ charm တွေဟာ မြင်ရတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအဖို့ ငြင်းဆန်ခြင်းဟာမစွမ်းသာတဲ့ undeniable ပိုင်ဆိုင်မှု assets တွေပါပဲ။ ဒီတော့လဲ haveacrush on (somebody) ကြိုက်မိသွားတာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သူ့အပြုံးလေးတစ်ခု၊ ပါးပေါ်က မှဲ့လေးတစ်စက် ဒါမှမဟုတ် ပါးချိုင့်လေး တစ်ခုနဲ့တင် အရမ်းခိုက် to be smitten with somebody သွားတတ်တာလဲရှိတယ်။ကိုယ်နှစ်လိုတဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် eye contact ယူကာ သူနဲ့နီးစပ်အောင် chat (somebody) up စကားရှာပြောဖို့ကြိုးစားရတယ်။ မိန်းကလေးဘက်ကစတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ချို့ယဉ်ကျေးမှု အမြင်မှာ ပရောပရီ flirt with (somebody)လုပ်သလိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့။ တစ်ချို့ကျတော့လည်းasecret admirer တိတ်တခိုးချစ်နေရရင်ကြေနပ်နေကြပြန်တယ်။ တဘက်သတ်ဘ၀ unrequited love, unrequited passion ကိုတော့ ဘယ်သူမှလိုချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့
ချစ်စကားပြော propose လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုတက်မယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် ယောက်ျားလေးက ဒူးထောက် goes down on one knee ပြီး pop the question မေးခွန်းမေးတယ်။ အရှက်ကြီးတဲ့ မိန်းကလေးများကြတော့ ချက်ခြင်း အဖြေပေးရင်သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ စိတ်မ၀င်စားသလို indifference နေပြကြမယ်။ ဒါကို ကောင်လေးဘက်က အထာကိုင်နေတာ playing hard to get လို့ထင်တတ်တယ်။ ကောင်မလေးက yes လို့ဖြေလိုက်ရင်တော့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီပေါ့။
အချစ်က ပျော်ရွှင်ခြင်း happiness, joy၊ အနစ်နာခံခြင်း sacrifice, မျှော်လင့်ခြင်း hope, တွေကိုဆောင်ယူလာပေးမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ပွင့်လင်းရိုးသားမှု sincerity ရှိဖို့တော့လိုမယ်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားနားလည် admiration, appreciation, esteem, favour, honor, regard တတ်မှ ရေရှည်ခိုင်မြဲမယ့် long-term relationship ဖြစ်မှာပေါ့။ ချစ်စခင်စကြင်နာစ be in the flush of romance အချိန်မှာ ချစ်သူကို ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့အမည်တွေ terms of endearment တွေကလည်း darling, sweetheart, love, babe/baby, honey တဲ့အများကြီးပဲ။ ချစ်သူဘ၀နဲ့ကြာလာတဲ့အခါ အတူတူနေချင်လာကြရင် to take the plunge စေ့စပ်ကြ၊ လက်ထပ်ကြမယ်။ လူကြီးမိဘတွေစုံရာနဲ့ engage စေ့စပ်ကြမယ်။ tie the knots စုလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်ကြမယ်။ ကောင်လေးက သူ့ဇနီးလောင်း fiancee ကို စေ့စပ်လက်စွပ် engagement ring လေးပေးမယ်။ သတင်းကြားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ I can hear wedding bells ဘယ်တော့စားရမလဲလို့ နောက်လိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာဆောင်အတွက်တော့ နှစ်ဦးသားပီတိတွေနဲ့
ပြင်ဆင်ကြရမှာပါ။ ယူကေမှာတော့မင်္ဂလာဆောင်တွေဟာ Registry Office ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ civil ceremony အရပ်မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာဆောင်တဲ့ ထုံးတမ်းဆင်လာ white wedding မင်္ဂလာဆောင်ရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ ဘုရားကျောင်းမှာဆောင်ရင် ကြိုတင်ဘွတ်ကင် (booking) လုပ်ရတယ်။ draw upaguest list ဖိတ်မယ့်ဧည့်သည်စာရင်းလုပ်မယ်။ bridesmaids သတို့သမီးအရံနဲ့ best man သတို့သားအရံရွေးမယ်။ တကယ့်မင်္ဂလာပွဲလုပ်မယ့်နေ့အထိ pre-wedding nerves စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတတ်ကြတာသဘာဝပါ။ မင်္ဂလာဆောင် ဧည့်ခံပွဲ reception ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံ newly weds, just married ဖြစ်သွားကြပါပြီ။ leave on honeymoon ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ချင်ထွက်နိုင်ကြပြီလေ။ nuptial chamber သဉ္ဖာလီခန်းဆောင်လယ်မှာ မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေး ပေါင်းကြလေသတည်းပေါ့။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ relationship ဇတ်လမ်းလေးတွေကတော့ ပျော်စရာမကောင်းဘဲ အလွမ်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းရတာလည်းရှိတတ်တာပဲလေ။ The course of true love never did run smooth အချစ်စစ်တို့မည်သည် ဖြောင့်ဖြူးရာလမ်းမရှိဘူးလို့ ရှိတ်စပီးယားကြီးကတော့
ပြောခဲ့ဖူးတာပဲ။ အချစ်တစ်ခုကိုတည်မြဲဖို့ဆိုတာက အကြောင်းတရားတွေအများကြီး ကိုက်ညီမှဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း falling in love ချစ်ရတာထက် staying in love အချစ်ကိုတည်မြဲအောင်လုပ်ရတာ ပိုခက်တယ်လို့ ဆိုကြပါပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်မတူတဲ့အခါ haveadomestic/ havearow စကားများရန်ဖြစ်ကြပြန်တယ်။ မိန်းမကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားကပဲဖြစ်ဖြစ် he/she is playing away from home အပြင်မှာ old flame ငယ်ကျွမ်းဆွေနဲ့ပြန်ဇတ်လမ်းသစ်တွေရှာတဲ့အခါ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဖြစ်လို့ အိမ်နီးနားချင်းတွေကတောင် they have blazing rows လို့ပြောယူရမယ်။ တစ်ဖက်သားမှာ love sick, heartbroken အသည်းကွဲမယ်။ အချစ်နာကျမယ်။ သူ့ကို fed up with စိတ်ကုန်လာမယ်။ ဒီထက်ဆိုးလာရင် loose appeal မေတ္တာပျက်သွားမယ်။ အချစ်ကျောခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ hate, loathe, အမုန်းမြို့ရိုးရဲ့အစပေါ့။ despise, detest စက်စုပ်ရွံရှာတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး you are the person I hate most မေတ္တာတုန်းကြီးလို့ပြောလိုက်မယ်။ နောက်ဆုံး to split up လမ်းခွဲကြဖို့ပြောမယ့်စကား break-up lines တွေကလည်းမနည်းဘူး။
"ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ဝယ်အိမ်ထောင်သားမွေး" ကိစ္စတွေဟာသိမ်မွေ့နက်နဲတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူဘ၀ make love to somebody အချစ်နယ်ကျွံကြရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်း ချစ်သူက to dump somebody ပစ်သွားလို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ အဖေမပေါ်တဲ့ကလေး lovechild တွေရဲ့ဘ၀လေးတွေကသနားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာကမှ
အေးမြတဲ့ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူကိုရောအချစ်ခံရတဲ့သူကောနှစ်ဦးစလုံးအတွက် cheerful, glad, joyful, joyous, merry, pleased သာယာပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတဲ့ true love အချစ်စစ်နဲ့ ဘ၀ကြင်ဖော် soulmate တွေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by DORA MOE EI KHIN on September 23, 2011 at 12:16
ဒီလို တနေရာတည်းမှာ သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေတွဲသုံးပြတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ဆရာ။ နောက်ကိုလဲ များများရေးနိုင်ပါစေ။
Permalink Reply by Chanlay on September 23, 2011 at 14:46
အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့မကင်းနိုင်သရွေ့ ဒီစကားလုံးတွေက အမြဲလိုလို အသုံးဝင်မှာပါနော်....
Permalink Reply by 0oq96kzja18eg on September 23, 2011 at 14:52
Permalink Reply by Angelic Princess on September 23, 2011 at 15:20
Permalink Reply by Khin Thuzar on September 23, 2011 at 15:22
Permalink Reply by coffee on September 23, 2011 at 15:23
နေ့ စဉ်သုံးဘာသာစကားမှာတောင် အသုံးအနှုန်းမတတ်ရင် တလွဲမြင်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ...
အခုလို လေ့လာသူတွေအတွက်ရော အချစ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာက မလွတ်ကင်းနိူင်လို့စကားလုံးလေးတွေသိရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ....
ဆက်လက်ပြီး သင်ခန်းစာလေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ် ရှင့် ...
Permalink Reply by 2t3cejvvpeemz on September 23, 2011 at 15:27
အခုလို spelling & meaning ပါထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် မှတ်သားထားပါ့မယ်။ Ko Zar Ni ကိုကြည့်ရတာ အချစ်အကြောင်းကို တော်တော်လေးကို လေ့လာထားပုံပေါ်ပါတယ်။ ဟီး...
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on September 27, 2011 at 10:23
လေ့လာထားတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ target audience ပေါ်မူတည်ပြီး သူ့တို့စိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းလေးတွေရေးတော့ ပိုမှတ်မိလွယ်တာပေါ့။ ကလေးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်း power rangers တို့ naruto တို့ဖြစ်သွားပြန်တာပဲ။
Permalink Reply by Aung Zaw Tun on September 23, 2011 at 15:28
Permalink Reply by 2qrtjxnbicb9b on September 23, 2011 at 15:32
Thankathousand of words Sayar.
Permalink Reply by 00j0r5c8ivby1 on September 23, 2011 at 15:38
very nice!!! thz for ur presentation...................
Permalink Reply by 2lhqc255oe6la on September 23, 2011 at 15:41